Wasiir hore oo loo magacaabi doono gudoomiyaha gobolka Banaadir. - Caasimada Online
Home Warar Wasiir hore oo loo magacaabi doono gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Wasiir hore oo loo magacaabi doono gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka soo baxdo xafiiska Madaxweyne Xasan sheikh Wareegto Xilka looga qaadayo Maxamud Axmed Nuur (Tarzan) oo labadii sano ee ugu danbeysey ahaa Guddoomiyaha Gobolka Banadir & Duqa Magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in xilkaas loo magacaabi Doono C/Raxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow), waxaana ilo Wareedyo laga helay Xarunta Madaxtooyada ay sheegayaan in Tarsan dhawaan Xilkaas laga qaadi Doono.
Tarsan ayaa la sheegay in ay iska hor imaadeen Ganacsatada magaalada Muqdisho taasi oo keentay in Madaxweyne Xasan Sheikh ay si toos ah u gaarto cabashadaas ka timid Ganacasatada.
C/Raxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) in uu uu Noqdo Guddoomiyaha Gobolka Banadir & Duqa Magaalada Muqdisho ayaa dad badan waxay u arkaan horumar uu Gobolka banaadir ku Talaabsaday, maadaama Xiligii uu ahaa Wasiirkii Warfaafinta waxd badan uu ka qabtay xaalada saxaafada iyo hanaanka bulshada ay ula shaqeeyaan Warfaafinta.
Eng. Yarisow ayaa ah aqoon yahan wax badan ka qaban kara xaalada amaan ee Gobolka banaadir iyo isku socod la aanta Xiliyada habeenkii ah, taasi oo ay u dheer tahay in Wadooyinka Magaalada Muqdisho ay u baahan yihiin dhismooyin oo xiliga Roobka dadka Muqdisho aysan isku socon Karin gaadiidka.
C/raxmaan Cumar ayaa 10 sano madax ka soo ahaa Dowladda Hoose ee London, UK oo uu Agaasime ka ahaa Waaxda Guryeynta oo runtii leh aqoon ku aadan sida Dowladaha Hoose ay u shaqeeyaan.
Shaqsiyada Eng. Yarisow ayaa lagu tilmaamaa in uu yahay shaqsi aad u fur furan aqoona u leh, arimaha bulshada, Walow Qilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay Gudoomiyaha Xilkiisa dhamaaday Tarsan iyo Ganacsatada oo ay barbar socoto dagaalka uu saxaafada kula Jiro Tarasan.
Afhayeenkii Hore ee Xukuumadii Soomaaliya iyo Wasiirkii Warfaafinta ayuu soo qabtay C/Raxmaan Cumar Yarisow taasi oo ay u dheer tahay aqoonta maamul ee Dowlada Hoose uu u leeyahay, maadaama dalka Ingiriiska uu in badan ku Noolaa uu ka soo shaqeeyay Dowlada hoose ee dalkaas.